बिहानीको क्षितिज पनि, किन कालो कालो देख्छु !!
नेपालीको मनको घाउ, अझै पनि आलो देख्छु !!
पाउनै पर्छ प्रत्येकले, गाँस, बास र कपास
भन्थे, गरिबको आङमा, च्यातिएकै टालो देख्छु !!
देख्छु कतै गगनचुम्बी, महलमा मोजमस्ती
गाउँ बस्तीका झुप्रामा चाहिँ, माकुराको जालो देख्छु !!
रैयाको’नि अभाव देख्छु, कसैलाई कतै, कतै-
सुनकै सिक्री गलाभरी, र हातमा बालो देख्छु !!
घुमिफिरी सबको पालो, कुमालेको चक्र जस्तै
आउँछ भन्थे, आएन खै, धनकै मात्र पालो देख्छु !!
किन यत्रो विभेद हो?, गरिब र धनि बीचमा
देख्छु कतै फालाफाल छ, कतै रित्तो डालो देख्छु !!
Previous For Full-Timers